विश्वकै सवैभन्दा सानो मोबाईल | मेरो कलम
विश्वकै सवैभन्दा सानो मोबाईल
Nepali January 3, 2014
– यहि पुस १८ गतेदेखी काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भईरहेको एक हप्ते क्यान ईन्फोटेक मेलामा खासै हेर्न लायक केहि त्यस्तो नयाँ प्रविधी देखिएन । प्रत्येक वर्ष झै देखिदै आएको पुरानो भईसकेको मोडलका कम्प्युटर, ल्यापटप, ट्याब्लेट, स्मार्ट टिभी, मोबाईल, ईन्भटर, एन्टिभाईरस, फोटोकपी मेसिन, प्रोजक्टर, पेन ड्राईभ आदि ईत्यादी । साथै विभिन्न ईन्टरनेट सेवा वितरक कम्पनीहरुले नै स्टल भरिएको थियो । आश लागेको थियो विश्व बजारमा चर्चा कमाएको गुगल ग्लास देख्न पाईन्छ, यदाकदा क्यान ईन्फोटेकमा गुगल ग्लास राखिन्छ रे भन्ने पनी नसुनेको होईन तर त्यो त हल्ला मात्रै भएको त्यहि गएपछि पुष्ठी भयो । तरपनी मेलाको आकर्षण थियो किभी मोवाईल ।
यो मोबाईल विश्वकै सवैभन्दा सानो भन्दा सानो मोवाईल भएको किभी मोबाईलले दाबी गरेको छ । एक्स्पो हेर्न आउने दर्शकको लागी भनेर बनाईएको यो ब्रोसरमा यसै भनिएको छ । “किभी मोबाईल प्रेजेन्ट्स्, दि ओल्ड स्मलेष्ट मोबाईल”।
किभीमा के त्यस्तो विषेशता छ त ?
किभीको सवैभन्दा सानो भनिएको मोबाईल सेट बिक्रिको लागी राखिएको थिएन, मात्र अडर गर्न सकिन्थ्यो । एउटा सेट थियो त्यो पनी निकै परै बाट मात्रै हेर्नु पर्ने । त्यो मोबाईलको तौल र साईज के कती भनेर सोध्दा भर्खरै ल्याईएकोले यकिनका साथ भन्न नसकिने कम्पनीका एक व्यक्तिले वताएका थिए । कसरी विश्वको सबैभन्दा सानो मोबाईल भयो त ? भन्ने प्रश्नमा, लौ हातमा लिनुस् र अन्दाज गर्नुस् भनेर उनैले हातमा थमाईदिएका थिए । मेरो अनुमानमा त्यो मोबाईल ३० देखी ५० ग्राम तौल सम्मको हुनपर्छ । उनी भन्दैथिए, अहिल्यसम्म कुनै भिजिटरले यसलाई हात लाउन पाएका थिएनन्, पहिलो चोटी छुन पाउने व्यक्ति तपाईनै हो । हातमा राखेको त्यस्तै ३ सेकेण्डपनी नवित्दै टपक्कै टिपि पनी हाले ।
किभी मोबाईलको तौल र साईज सानो भनिएझै मुल्य पनी कम छ । मात्र ३ हजार नेपाली रुपैयाँ । त्यसो त यो फोनलाई ब्लुतुथ फोन पनी भनिएको छ । कानमै अड्याएर कुरा गर्न मिल्ने पनी । एकवर्षको वारेण्टी रहेको किभी मोबाईल यदि किन्ने विचारमा हुनुहुन्छ भने व्याट्री र चार्जरमा भने ६ महिनाको मात्रै वारेण्टी पाउनुहुनेछ । मज्जाको कुरा के छ भने यो मोबाईलमा मेमोरी पनी राख्न सकिन्छ र म्युजिक प्लेयरको मज्जा पनी लिन सकिन्छ ।
तपाईलाई देखाउनको लागी भनेरै यो भिडियो पनी रेकर्ड गरेको छु । यो भिडियो भने परैबाट जुम गरेर रेकर्ड गरिएको हो । नजिकैवाट रेकर्ड गर्न कुनै हालतमा सकिएन । किभी मोबाईलका आधिकारीक व्यक्तिहरुले नजिकवाट रेकर्ड गर्नै दिएनन् । अचम्म लाग्यो, मैले खोज्दा त ईन्टरनेटमा पनी भेटिहाल्छु, किन नजिकबाटै रेकर्ड गर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा फेरी उनै व्यक्ति भन्दैथिए, त्यो परै राखिएको मोबाईलमा किभी भन्ने लागो (स्टिकर) टासिएको छैन, अहिल्य पुरै सादा छ । भिडियोनै खिच्ने हो भने मोबाईलको ढाडतर्फ पारेर खिच्नुस् हैन भने यो ब्रोसर लैजानुस् ( ब्रोसर दिदै भने ) यसैलाई खिच्नुस् । ल, ठिक छ नजिकबाट भन्दापनी बरु परैबाट खिच्छु भनेर रेकर्ड गरिएको क्लिप यी यहि हो: